BOScoin စျေး - အွန်လိုင်း BOS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BOScoin (BOS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BOScoin (BOS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BOScoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 707 616.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BOScoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BOScoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BOScoinBOS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00485BOScoinBOS သို့ ယူရိုEUR€0.0041BOScoinBOS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0037BOScoinBOS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00442BOScoinBOS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0431BOScoinBOS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0305BOScoinBOS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.107BOScoinBOS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.018BOScoinBOS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00641BOScoinBOS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00676BOScoinBOS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.108BOScoinBOS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0376BOScoinBOS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0264BOScoinBOS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.363BOScoinBOS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.817BOScoinBOS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00665BOScoinBOS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00738BOScoinBOS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.151BOScoinBOS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0337BOScoinBOS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.518BOScoinBOS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩5.74BOScoinBOS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.87BOScoinBOS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.356BOScoinBOS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.134
BOScoinBOS သို့ BitcoinBTC0.0000004 BOScoinBOS သို့ EthereumETH0.00001 BOScoinBOS သို့ LitecoinLTC0.00009 BOScoinBOS သို့ DigitalCashDASH0.00005 BOScoinBOS သို့ MoneroXMR0.00005 BOScoinBOS သို့ NxtNXT0.378 BOScoinBOS သို့ Ethereum ClassicETC0.000715 BOScoinBOS သို့ DogecoinDOGE1.4 BOScoinBOS သို့ ZCashZEC0.00006 BOScoinBOS သို့ BitsharesBTS0.149 BOScoinBOS သို့ DigiByteDGB0.155 BOScoinBOS သို့ RippleXRP0.0172 BOScoinBOS သို့ BitcoinDarkBTCD0.000167 BOScoinBOS သို့ PeerCoinPPC0.0161 BOScoinBOS သို့ CraigsCoinCRAIG2.21 BOScoinBOS သို့ BitstakeXBS0.207 BOScoinBOS သို့ PayCoinXPY0.0847 BOScoinBOS သို့ ProsperCoinPRC0.609 BOScoinBOS သို့ YbCoinYBC0.000003 BOScoinBOS သို့ DarkKushDANK1.56 BOScoinBOS သို့ GiveCoinGIVE10.51 BOScoinBOS သို့ KoboCoinKOBO1.11 BOScoinBOS သို့ DarkTokenDT0.00447 BOScoinBOS သို့ CETUS CoinCETI14.01